Ch 21 लूका – 2माछा
घर / बाइबल / लूका को सुसमाचार / Ch 21 लूका
21:1 र वरिपरि देख, उहाँले धनी र offertory मा आफ्नो अनुदानले दिइरहेको देखे.
21:2 त्यसपछि उहाँले पनि एक निश्चित विधवाको देखे, एक pauper, दुई साना पीतल सिक्का मा दिइरहेको.
21:3 अनि उहाँले भन्नुभयो: "साँच्चै, म तपाईंलाई भन्न, यो गरिब विधवाले अधिक सबै भन्दा अरूलाई राख्नु भएको छ कि.
21:4 यी सबै लागि, आफ्नो प्रशस्त मात्रामा बाहिर, परमेश्वरको लागि उपहार थप छन्. त्यो तर, त्यो आवश्यकता के को बाहिर, त्यो बस्न थियो कि सबै मा राखे छ। "
21:5 र तिनीहरूलाई केही भन्दै थिए, मन्दिरमा बारेमा, यसलाई उत्कृष्ट पत्थर र उपहार संग सजी थियो, उहाँले भन्नुभयो,
21:6 "तपाईं देख्न कि यी कुराहरू, त्यहाँ ढुङ्गामा पत्थर छोडेर गरिने छैन जब दिन आउनुहुनेछ, जो लोटेका छैन। "
21:7 त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न, यसो: "शिक्षक, जब यी कुरा हुनेछ? अनि यी कुराहरू हुनेछ गर्दा चिन्ह हुनेछ?"
21:8 अनि उहाँले भन्नुभयो: "होसियार हुनुहोस्, तपाईं छक्याउनसक्छ नत्र. धेरै को लागि मेरो नाम मा हुनेछ, यसो: 'म त्यो हुँ,'र, 'समय नजिकै आएको छ।' अनि त, तिनीहरूलाई पछि जान चयन छैन.
21:9 र जब तपाईं लडाई र seditions को सुनेका हुनेछ, आत्तिनुपर्ने छैन. यी कुराहरू पहिलो हुन पर्छ. तर अन्त त चाँडै छ। "
21:10 त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "मान्छे मान्छे विरुद्ध खडा हुनेछ, र राज्य विरुद्ध राज्य.
21:11 र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा ठूलो भूकम्प हुनेछ, र रूढी, र अनिकाल, र स्वर्गबाट ​​क्रोध; र त्यहाँ ठूलो संकेत हुनेछ.
21:12 तर यी सबै कुराहरू पहिले, तिनीहरूले तपाईं आफ्नो हात राख्नु र तपाईं खेदो गर्नेछ, सभाघरहरूमा र हेरचाह मा तपाईं भन्दा handing, राजा र governors पहिले तपाईं तान्ने, मेरो नाम को किनभने.
21:13 र यो तपाईं गवाही दिन लागि मौका हुनेछ.
21:14 त्यसैले, यो तपाईंको हृदयमा सेट: तपाईं प्रतिक्रिया सक्छ तपाईं कसरी अग्रिम विचार हुँदैन भनेर.
21:15 म तपाईंलाई एउटा मुख र बुद्धि दिनेछु लागि, प्रतिरोध वा खण्डन गर्न सक्नेछैनन् जो सबै आफ्नो विरोधीहरू.
21:16 अनि तपाईं आफ्नो आमाबाबु भन्दा हस्तान्तरण गरिनेछ, र भाइहरूलाई, र नातेदार, र मित्र. र तिनीहरूले तपाईं केही मृत्यु बारे ल्याउनेछ.
21:17 अनि तपाईं सबै किनभने मेरो नाम को द्वारा घृणा गरिनेछ.
21:18 र अझै, छैन आफ्नो टाउको को एक बाल नष्ट हुनेछ.
21:19 आफ्नो धैर्य गरेर, तपाईं आफ्नो प्राण अधिकार हुनेछ.
21:20 त्यसपछि, के तिमी यरूशलेम देखेको हुनेछ छन् एक सेना द्वारा encircled गर्दा, यसको उजाड नजिकै आएको छ कि त थाहा.
21:21 त्यसपछि यहूदियामा भएकाहरूलाई पहाडों गर्न भाग्न गरौं, र यसको बीचमा भएकाहरूलाई झिक्न, र देहात मा भएकाहरूलाई छैन यो प्रवेश.
21:22 यी लागि प्रतिकार को दिन, त्यसैले सबै कुराहरू पूरा हुन सक्छ कि, जो लिखित गरिएको छ.
21:23 त्यसपछि ती दिनहरुमा गर्भवती वा सुत्केरी भएकाहरूलाई धिक्कार. यस जनहरूमाथि देशमा र ठूलो क्रोध मा ठूलो संकट हुनेछ लागि.
21:24 अनि तिनीहरूले तरवार को बढत द्वारा पतन हुनेछ. अनि तिनीहरू सबै राष्ट्रका मा कैदीहरूलाई रूपमा दूर नेतृत्व गरिनेछ. अनि यरूशलेममा अन्यजातिहरूको द्वारा trampled गरिनेछ, राष्ट्रका पल्ट पूरा नभएसम्म.
21:25 र सूर्य मा चिन्ह र चन्द्र र तारा हुनेछ. अनि त्यहाँ हुनेछ, पृथ्वीमा, अन्यजातिहरूको बीचमा दुःखको, समुद्र को roaring मा भ्रम को बाहिर र तरंगहरु को:
21:26 डर बाहिर र कुराहरू भन्दा आशंका बाहिर दूर withering मानिसहरूले सारा संसार overwhelm हुनेछ. स्वर्गको शक्तिहरु लागि उत्प्रेरित गरिनेछ.
21:27 अनि त्यसपछि तिनीहरूले बादलले मा आउँदै मानिसको पुत्र देख्नेछन्, ठूलो शक्ति र बडाई संग.
21:28 तर यी कुराहरू हुन थाल्दा, आफ्नो टाउको उचाल्नु र तपाईं वरिपरि हेर्न, आफ्नो छुटकारा नजिक किनभने। "
21:29 अनि उहाँले तिनीहरूलाई एक तुलना भन्नुभयो: "नेभाराको रूख र सबै रूखहरू सूचना लिनुहोस्.
21:30 जब अहिले तिनीहरूले देखि फल उत्पादन, तपाईं गर्मी नजिकै छ भनेर थाह.
21:31 पनि त, तपाईं देखेको हुनेछ जब यी कुराहरू के, परमेश्वरको राज्यको नजिकै छ भनेर थाह.
21:32 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस वंशबाट दूर पार हुनेछ, यी सबै कुराहरू के सम्म.
21:33 स्वर्ग र पृथ्वीमा दूर पारित हुनेछ. तर मेरो शब्दहरू दूर पार हुनेछ.
21:34 तर आफैलाई गर्न ध्यान दिएर हुन, सायद lest आफ्नो हृदय आत्म-indulgence र खुमार र यस जीवनको फिक्री गर्नुहुन्छ द्वारा दबाउने हुन सक्छ. अनि त्यसपछि त्यो दिन अचानक तपाईं overwhelm सक्छ.
21:35 एक पासो जस्तै यो सम्पूर्ण पृथ्वीको अनुहार बस्न गर्नेहरूलाई overwhelm हुनेछ लागि.
21:36 अनि त, सचेत हुन, सबै कहिलेकाहीं प्रार्थना, ताकि तपाईं यी सबै कुराहरू देखि भाग्न योग्य आयोजित हुन सक्छ, भविष्यमा जो, र मानिसको पुत्र अघि खडा। "
21:37 Now in the daytime, he was teaching in the temple. तर साँच्चै, departing in the evening, he lodged on the mount that is called Olivet.